Ikhaya-N-Igadi | Eyedwarha 2021
Iindlela ezili-10 eziLungileyo zokuLahla iiLizard kunye neephela
Oonontloko namaphela zizinto ezimbi nezicaphukisayo ekhaya. Ke, funda ukuze wazi olona nyango lusemagqabini lokususa amacikilishe namaphela.
Iingcebiso zeVastu kuBomi obonwabileyo boMtshato (iingcebiso ngobuhlobo bomfazi-womfazi)
Ufuna ukonwaba emtshatweni emva komtshato, emva koko landela ezi ngcebiso ze-vastu zilula zobomi obonwabileyo emtshatweni.
I-Eco-Friendly Diwali: Imibono yokuhombisa yokunyusa uMhombiso weNdlu yakho usebenzisa iiNkunkuma
IDiwali ngumnyhadala wezibane kunye nemibala eqaqambileyo. Le Diwali, yongeza ubuhle kunye nokukhanya ekhayeni lakho ngokusebenzisa izinto zenkunkuma okanye izinto ezilahliweyo! Ukubhiyozela lo mnyhadala kuhlahlo-lwabiwo mali olusezantsi yinto etsala abantu abaninzi namhlanje.
Iindlela ezi-5 zokususa i-Tea Stain kwiingubo
Ukudinwa kukukhuhla iimpahla zakho ngesicoci ukususa ibala leti. Nazi ezinye zeendlela zokususa amabala eti kwiimpahla, ngokulula.
Iindlela ezi-7 ezilula nezilula zokususa amabala e-Ink kwiingubo
Ukubona iimpahla zakho ezinamabala ngeinki yenye yeempawu ezibuhlungu. Nokuba ungazama kangakanani, amabala akasayi kuhamba ngokulula. Ke ngoko, silapha ngamaqhinga athile alula onokuthi ngalo ususe ibala le-inki kwiingubo zakho.
Iingcebiso zokukhulisa imali ngokukhawuleza
Nazi ezinye iingcebiso zokuba ukhule imali ngokukhawuleza. Gcina isiqu semali yesityalo kwibhotile yamanzi kwaye uhombise ngaphakathi okanye ngaphandle.
Hlukana namacikilishe ekhaya ngezi ngcebiso zilula. Izidudu ekhaya zinokucaphukisa, ke zama ezi zimvo ukuze uzisuse.
Iindlela ezili-12 zoNyango olusebenzayo lokuSusa iiBugs zakho
Iibhedi zebhedi zixhaphake kakhulu kodwa uninzi lwabantu luyothuka kwaye alazi ukuba lusebenzisa njani na unyango olusisiseko lwasekhaya lweebhedi. Unyango olufana nesoda yokubhaka, iviniga, amagqabi elavenda, ityme njl.
Apho uyigcina khona imali ngokweVastu
Ukuba ufuna ukwandisa ubutyebi endlwini yakho, kukho iindawo ezithile zokugcina imali endlwini yakho. Ke funda ukuze wazi ukuba zeziphi iindawo ezifanelekileyo zokugcina imali ngokwe-vastu.
Iindlela ezisebenzayo zokuSusa idayi yeDayi kwiitawuli
Ungasusa njani amabala wedayi ezinwele kwitawuli? Ingaba ngumsebenzi onzima. Jonga ezinye zeengcebiso zokususa ibala ledayi kwiinwele.
Unyango lwasekhaya ukulahla amahobe
Esi sisisongelo ngokwenene! Nantsi indlela yokulahla amahobe ngokwemvelo kwibhalkoni yakho nakuphahla lwakho.
Olona nyango lusemagqabini lokususa iinyosi zobusi
Ukuba ufuna ukwazi ukuba ungazisusa njani iinyosi zobusi ekhaya, ndikuxelele kakuhle ezona ndlela zintle zokuzisusa ekhaya.
Iindlela ezi-8 zokususa amabala eTurmeric kwiingubo
Nangona kunzima ukususa amabala e-turmeric ezingubeni, kukho iindlela ezahlukeneyo, ezisetyenziselwa ukwenza oku. Ngokwesiqhelo kusetyenziswa isepha elungileyo okanye ilamuni. Apa
Iindlela ezili-10 ezilula zokuCoca isitya esitshisiweyo
Enye yezinto ekunzima ukuzisusa kukutshiswa kwinqanawa. Nazi ezinye zeendlela zokucoca inqanawa etshisiweyo.
Uyilungiselela njani iDiyaas ekhayeni lakho kwiDiwali
Funda ukwazi indlela yokulungiselela i-diyas ekhaya le Diwali. Ezi ziindlela ezilula zokulungiselela ii-diyas ekhaya.
Iingcebiso zokuKhulisa iCurry Leaf Plant
Amagqabi eCurry ayinakuphepheka ekuphekeni kwamaIndiya. Izityalo zamagqabi e-Curry zikhula ngokukhawuleza kwi-shrub enqabileyo ekhula kakuhle kuyo
Iindlela zokususa amabala e-Iron kwiimpahla
Ukukhupha amabala entsimbi empahleni, nazi iingcebiso ezimbalwa kuwe.
I-Ganesh Chaturthi yoMnyhadala woMhombiso weeNgcono Ekhaya
Funda ukuze uyazi imibono elula yokuhombisa yomnyhadala. Jonga iindlela zokuhombisa izithixo ze-ganesh ze-iferti.
Iingcebiso ezi-7 zeVastu zokuzisa amandla aqinisekileyo kwikhaya lakho
Ngaba uyazi ukuba ngokugcina izinto ezithile ekhayeni lakho, unokufumana ubuchule? Funda ukuze wazi iingcebiso ze-vastu ezisixhenxe zokuzisa amandla aqinisekileyo ekhayeni lakho.
Iindlela zokuhombisa uKrishna ngeJanmashtami
Umnyhadala olindelwe kakhulu wamaHindu, uJanmashtami usondele. Lixesha lokuba uhombise igumbi lakho le-pooja kunye nesithixo seBal Gopal. Hombisa Krishna isithixo nge ....
Ungalufumana njani ulusu olufanelekileyo kwiintsuku ezi-2 ngokwendalo
Uyifaka kanjani ipakethe yobuso ekhaya
iinwele zombala weenwele zolusu lwaseIndiya
Ungayilungisa njani imango pickle ekhaya
Intsingiselo yokuxhonywa kwi-hindi
ulahlekelwa njani ngamanqatha esisu kwiintsuku ezi-3 ngokwendalo